बजेटबारे पुँजीबजार लगानीकर्ताको धारणा : कोही चित्त बुझाउने पक्षमा, कोही निराश
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर अहिले शेयर लगानीकर्ताहरूले टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । यतिबेला बजेटलाई लिएर लगानीकर्ता नै दुई खेमामा बाढिएका छन् । केही लगानीकर्ता बजेटमा समावेश भएका कुराहरू पनि लगानीकर्ताका लागि उपलब्धि पूर्ण भएको मान्न तयार छन् भने केही लगानीकर्तालाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएकोमा आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
के भन्छन् पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरु ?
सेयरबजार लगानीकर्ता दबाब समूहका अध्यक्ष हरि ढकालले यस वर्षको बजेटमा लगानीकर्तालाई पूर्ण रूपमा बायस गरिएको र यसबाट लगानीकर्ता थप निराश भएको बताए ।
उनले भने, ‘यस वर्षको बजेट पुँजी बजारका लागि निरशाजनक छ । आजभन्दा दशौँ वर्षअगाडिकै कुरा हो, स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याउने, दोस्रो बजार कारोबारलाई विद्युतीय प्रविधिमा लैजाने आदि सबै पुराना हुन् । यस पटकको बजेटमा पनि पुरानै कुरामा झारा टार्ने काम गरिएको छ ।
अध्यक्ष ढकालले लकडाउनबाट प्रभावित लगानीकर्तालाई राहतको प्याकेज ल्याउने आशा गरे पनि त्यसो नभएको बताए । कोरोना प्रभावित अन्य क्षेत्रलाई राहतको प्याकेज ल्याइरहँदा पुँजी बजार लगानीकर्तालाई कुनै व्यवस्था नगरिनु दु:खद भएको उनको भनाइ छ ।
मार्जिन कलको सीमा ६० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेका लगानीकर्ताहरू त्यसो नहुँदा थप निराश भएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।
त्यसो त लगानीकर्ता संरक्षणा चौधरी र बजार अध्ययनकर्ता राजु पौडेल भने बजेट पूर्ण रूपमा निराशाजनक भने नभएको बताउँछन् ।
नेप्सेलाई प्रविधिमैत्री बनाइने, स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याइने र धितोपत्र बाेर्ड, नेप्से र सीडीएस एण्ड क्लियरिङको दायरा विस्तार गर्ने कुरा बजेटमा समेटिनु सकारात्मक भएको पुँजी बजार लगानीकर्ता संरक्षणा चौधरी बताउँछिन् ।
उनले भनिन्,‘यीबाहेक ५ प्रतिशतमा पुँजीबजार लाभकर अन्तिम होस् भन्ने चाहना थियो, त्यसो भएन ।’ बजेटमा लाभकरलाई स्पस्ट रूपमा नसमेटिँदा लगानीकर्तालाई अन्याेल बनाएको चौधरीको तर्क छ ।
यद्यपि लगानीकर्ता चौधरी भने यस वर्षको बजेट समग्रमा ठीकै भएको मान्छिन् । उनले सबै लगानीकर्तालाई चित्त बुझाउन आग्रहसमेत गरिन् ।
त्यसो त सेयरबजार लगानीकर्ता तथा बजार अध्ययनकर्ता राजु पौडेल पनि बजेटमा सेयर शब्दले स्थान पाउनु नै अहिलेका लागि खुसीको कुरा भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘पुँजीबजारलाई पहिलेदेखि नै बजेटमा बायस गरिँदै आएको थियो । यो पटक सानो भए पनि स्थान दिइएको छ । यो विस्तारै बढ्दै जानेछ भन्ने आशा गरौँ ।’
पौडल अहिलेलाई निराश भएर हतोत्साहित बनिहाल्नुपर्नेमा सहमत छैनन् ।
यता, नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले भने लगानीकर्तालाई बजेटमा नसमेटेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
पटकपटक लगानीकर्ताका समस्याका बारेमा मागहरू अर्थमन्त्रीसमक्ष राखे पनि कानमा तेल हालेर बसेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले राखेका मागहरू समेत बजेटमा सम्बाेधन भएन, अरु के कुरा गर्नु ? कमसेकम पुँजीबजार लाभकरलाई ५ प्रतिशत नै अन्तिम बनाइएको भए केही राहत हुने थियो । तर त्यसो भएन ।’
अध्यक्ष रौनियारले कोभिड–१९ ले थलिएका लगानीकर्तालाई कुनै प्रकारको राहतको व्यवस्था नगरिँदा पुँजीबजारप्रतिको नकारात्मक धारणा अर्थमन्त्रीमा अझै कायमै रहेको बताए ।
त्यति मात्र नभएर अहिले लगानीकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि बजेटले पुँजीबजार लगानीकर्तालाई नसमेटेको प्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
यद्यपि अब आउने मौद्रिक नीतिले पुँजीबजार लगानीकर्ताको माग समेट्छ कि भन्ने आशामा छन् लगानीकर्ताहरू ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १६, २०७७, १५:१४:००